जानि राखौँ…….यि ११ कारणले महिलाहरुमा यौन उत्तेजना बढ्छ…..! « गोर्खाली खबर डटकम
जानि राखौँ…….यि ११ कारणले महिलाहरुमा यौन उत्तेजना बढ्छ…..!
एजेन्सी । अधिकांश पुरुष यौन सक्रियताका बेला माहिलाहरूलाई उत्तेजित गर्न तिनका एक वा दुई शारीरिक अंगमै बढी केन्द्रित हुन्छन् तर महिलाका शरीरमा कैयन् त्यस्ता अंग छन् जहाँ स्पर्श मात्र गर्दा पनि उनीहरूमा कामेच्छा जागृत हुन्छ ।
महिलाको विभिन्न भाग अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। उक्त भागको छाला धेरै पातलो हुन्छ र त्यहाँ कैयन् उत्तेजक तत्त्व हुन्छ। त्यसैले जस्तै महिलाहरु पनि स्पर्श पछि कामोत्तेजक हुन्छन् र यौन सम्पर्क गर्न तयार हुन्छन् ।
१.तिघ्राको भित्री भाग
तिघ्राको भित्री भाग अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । उक्त भागको छाला धेरै पातलो हुन्छ र त्यहाँ कैयन्उ त्तेजक तत्त्व हुन्छ । त्यसैले यो भागलाई कामोत्तेजक मानिन्छ । यो भागमा स्नेहपूर्व भए, सुमसुम्याए वा चुम्बन गरे महिलाहरूमा कामोत्तेजना वृद्धि हुन्छ र उनीहरू यौनसम्पर्कका लागि बढी उत्प्रेरित हुन्छन् र त्यसबाट आनन्द पनि प्राप्त गर्छन् ।
२.हातका भित्री भाग
हातको भित्री भाग पातलो हुन्छ र त्यहाँ कैयन् उत्तेजक तत्त्व हुन्छन् । यो भागमा प्रेमपूर्ण क्रियाकलाप गर्नाले तुरुन्तै मस्तिष्कसम्म संकेत पुग्छ । यो भागमा यौनसाथीको स्पर्श मात्र पनि महिलाहरूलाई कामोत्तेजित गर्न पर्याप्त छ ।
कान पनि महिलाहरूको प्रमुख कामोत्तेजक अंगमध्ये एक हो । यो शारीरिक एवं मानसिक दुवै रूपमा कामोत्तेजित गर्न सहायक हुन्छ । महिलाहरू को कानमा प्रेमपूर्वक फुसफुसाए, चुम्बन गरे वा जिस्किए उनीहरूको कामोत्तेजना बढ्छ । यसबाहेक यौन सम्र्पकका बेला कामुक कुराकानी गर्दा पनि उनीहरू कामोत्तेजित हुन्छन् ।
४.गर्दनको पछाडिको भाग
गर्दन पछाडिको भागमा केश रेखाको ठीक मुनिदेखि लिए कानपछाडिको भागसम्म अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । यो हिस्सामा स्पर्श वा चुम्बन गर्नाले महिलाहरूमा कामोत्तेजना जागृत हुन्छ र उनीहरूले यौनसम्पर्कमा पर्याप्त आनन्द प्राप्त
आँखाको परेला पनि महिलाहरूला कामोत्तेजित गर्न सहयोगी हुन्छ । परेलामा प्रेमपूर्व चुम्बन उत्तेजित गर्नका लागि पर्याप्त हुन्छ । परेलाको छाला पातलो हुन्छ र कैयन्उ त्तेजक तत्वको उपस्थितिले त्यसलाई संवेदनशील बनाउँछ ।
प्रायः गरी मानिसहरू यो भागलाई बेवास्ता गर्छन्, तर आश्चर्यजनक रूपले यो कामोत्तेजक अंगमध्येको एक हो । यो स्थान नर्व एन्डिङबाट भरिपूर्ण हुन्छ । फलस्वरूप यो भाग अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ । पाइतालाको स्पर्श मात्रले पनि महिलाहरूमा कामोत्तेजना जागृत गर्छ ।
महिलाहरूको हात पनि उनीहरूलाई कामोत्तेजित गर्न सहायक हुन्छ । वास्तवमा हत्केलामा कैयन् दबाबबिन्दु हुन्छ । जसलाई दबाउनाले आनन्दमा वृद्धि हुन्छ ।
जिब्रो यौन सम्पर्कका सन्दर्भमा सबैभन्दा संवेदनशील अंग हो । जिब्रोमा चुम्बन गर्ने, चुस्ने वा चाट्ने कामले महिलाहरूमा कामवासना जागृत हुन्छ ।
९.घुँडाको पछाडि भाग
यहाँको छाला पातलो भए घुँडा पछाडिको भाग पनि अत्यन्त कामोत्तेजक हुन्छ । यो भागमा मुहार वा हातले रगड्नाले कामोत्तेजना सिर्जना हुन्छ र महिलाहरू यौन सम्पर्कप्रति अग्रसर हुन्छन् ।
१०. पेटको तल्लो भाग
महिला शरीरको यो भाग पनि अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । यो भागमा हल्का हातले मसाज गर्दा वा थोरै काउकुती लगाउँदा महिलामा कामोत्तेजना बढ्छ र उनीहरू यौन सम्पर्कका लागि तत्पर हुन्छन् ।
पिठ्युँ पनि पर्याप्त संवेदनशील हुन्छ । यहाँ चुम्बन गर्नाले महिलाहरू उत्तेजित त हुन्छन् नै साथै उनीहरूको तनाव पनि कम हुन्छ । यौनमा सक्रिय बनाउन यो स्थानमा आफ्नो मुहार रगड्नुपर्छ ।
एउटा घरेलु बिधिः पार्छ ३ दिनमै कुर्कुच्चा फुट्ने समस्या चट्